विद्यालयलाई ‘स्मार्ट’ बनाउन गुल्मी रेसुङ्गा शैक्षिक तथा धार्मिक महोत्सव-२०७५ को आयोजना ! – ebaglung.com
विद्यालयलाई ‘स्मार्ट’ बनाउन गुल्मी रेसुङ्गा शैक्षिक तथा धार्मिक महोत्सव-२०७५ को आयोजना !
२०७५ भाद्र २०, बुधबार ०५:१०	Top News, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७५ भदौ २० । शैक्षिक सुधारका लागि गुल्मीको एक विद्यालयले यहि भदौ ३० गतेबाट सप्ताह ब्यापी शैक्षिक तथा धार्मिक महोत्सव गर्ने भएको छ । सदरमुकाम तम्घासमा रहेको उपल्लो तम्घास माध्यमिक विद्यालयले गुल्मी रेसुङ्गा शैक्षिक तथा धार्मिक महोत्सव–२०७५ आयोजना गरेको हो । महोत्सव मुल आयोजक समितिले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो जानकारी गराएको थियो ।
कृषि ब्यबसायीक शिक्षा तथा सुविधा सम्पन्न स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन र फरक क्षमता (बहिरा ) भएका विद्यार्थीहरुको कक्षा स्तरोन्नतीका लागि महोत्सवको आयोजना गरिएको मुल समारोह समितिका सदस्य सचिव प्रधानध्यापक राममणी पन्थीले जानकारी दिए ।
उनले भने–‘ सदरमुकाममा रहे पनि आर्थिक रुपले निकै पछाडी परेको विद्यालय हो यो । त्यसका बाबजुद पनि हामीले लामो समय देखि फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरुलाई कक्षा ५ सम्म पढाउँछौं र त्यो भन्दा माथिल्लो कक्षा पढाउन पोखरा काठमाण्डौ सम्म पठाउनु पर्ने अवस्था छ ।
महोत्सव मुल समारोह समितिका संयोजक तथा रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्वर ९ का वडाध्यक्ष नारायण सुनारले सवैले मेरो होईन, हाम्रो अभिभारा सम्झेर महोत्सवलाई सफल पार्न आग्रह गरे । कसैले पनि उसको र मेरो नभनौं , हाम्रो महोत्सव हो र यसलाई सफल पार्ने दायित्व हामी सवैको हो भन्ने भावनाका साथ जिम्मेवारी सम्हालेर काम ग¥यौ भने हामी सफल हुनेछौं, उनको आग्रह थियो ।
वडाध्यक्ष सुनारले भने, हामीलाई बिश्वास छ यस जिल्ला र छिमेकी जिल्लाका दानवीरहरुले समेत हामीलाई साथ दिनु हुने छ । म यसै मञ्चबाट जिल्लाका सवै जनप्रतिनिधी, सरकारी कर्मचारी, संघ संस्था, पत्रकार र सर्वसाधरण सम्मलाई भदौ ३० गते देखि हुन गई रहेको महोत्सवमा आउनु हुन चुले निम्तो दिन्छु ।
महोत्सव प्रचार प्रसार समितिका संयोजक तथा वडा नम्वर ७ का वडाध्यक्ष मोहन पाण्डेले प्रत्येकले सामाजिक सञ्चाल देखि हरेक माध्यबाट ब्यापक प्रचार प्रचार गरौं, यसमा सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरुको ठुलो भुमिका हुन्छ , यसर्थ स्थानिय देखि राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम सम्मलाई सहयोग गरी दिन आग्रह गरेका थिएं ।
विद्यालय प्राङ्गणमा पुरुषोतम शरण शास्त्रीको प्रमुख वाचकत्वमा महोत्सव हुने भएको छ । १०८ शालिग्राम, भगवान दर्शन परिक्रमा गरिने छ । सामुहिक व्रतबन्ध, ग्रहशान्ति, चौराजी पुजा, तुलादान, गौदान, भुमिदान, लाख बत्ति प्रज्वलन असोज छ गते गरिने कार्यक्रम छ ।
पहिलो दिन भदौ ३० गते भव्य पदयात्रा सहित महोत्सव उद्घाटन हुने छ । रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसालको संयोजकत्वमा जनप्रतिनीधीहरुको सल्लाहकार समिति बनाईएको छ । भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौड्यालको संयोजकत्वमा सवै कार्यालय प्रमुखहरु समेट्ने गरी संरक्षक समिति बनाईएको छ । विभिन्न शहर र विदेशमा रहेका गुल्मेलीहरु समेट्न सम्पर्क ब्यक्तिहरु राखिएको प्रधानध्यापक पन्थीले जानकारी दिए ।